Desktop Shortcut Icon အားလုံး တူနေခြင်း ပြဿနာ ~ မိုးညိုသား
Desktop Shortcut Icon အားလုံး တူနေခြင်း ပြဿနာ
1:07 AM နည်းပညာ, ဆော့ဝဲလ်များ No comments
သူငယ်ချင်းတွေ ဒီပြဿနာလေးကို ကြုံဖူးကြမယ်ထင်ပါတယ်... Program (or) Software တစ်ခုခုကို
Right Click > Open With ကို နှိပ်မိလို့ဖြစ်စေ Virus ကြောင့်ဖြစ်စေ
Desktop ပေါ်က Icon တွေ အားလုံး Internet Explorer (IE), Window Media
Player,Adobe Reader,iTunes,PDF,Excel.lnk,Word စ,တဲ့ Icon တွေချည်း
ဖြစ်သွားတတ်တာပါ... ဥပမာ IE Icon တွေချည်းဖြစ်သွားတဲ့အခါ ဘယ် Program ကို
ဖွင့်ဖွင့် IE ပဲ ပွင့်နေပြီး ကိုဖွင့်ချင်တဲ့ Program ကို
ဖွင့်မရတော့ပါဘူး.... အဲ့ဒီလို ဖြစ်လာရင် တချို့က Window
ပြန်တင်တတ်ကြတာများပါတယ် ... အမှန်က Window ပြန်တင်စရာ မလိုပါဘူး... အောက်
နည်းလမ်း နှစ်မျိုးနဲ့ ဖြေရှင်းပေးနိုင်ပါတယ်...
Run ကို ခေါ်ပါ... (Win Key + R)....
Run Box မှာ regedit ရေးထည့်ပြီး Enter ခေါက်ပါ....
Registry Editor တတ်လာရင် အောက်ပါ လမ်းကြောင်းအတိုင်း တဆင့်ခြင်းသွားပါ....
lnk Floder ကိုဖွင့်ပါ .. Subfolders ထဲက ဖိုင်လ်တွေကို Delete လုပ်ပေးလိုက်ပြီး စက်ကို Restart ချပေးလိုက်ပါ....။
Steps to recover back all original icons:
Open run command by pressing windows key (windows logo) and R together.
Browse the computer system registry into
(It may take time to reach there, so be patient)
Delete all subfolders under “.lnk” directory but please never ever delete the “.lnk” folder.
Close registry editor (regedit).
The shortcuts on your desktop will still not work now although clicking on it will work fine. So better reboor your system.
ဒီနည်းလမ်းကတော့ အရမ်းလွယ်ပါတယ် အောက်မှာတင်ပေးထားပေးတဲ့ Windows7shortcut Fixer ဆိုတဲ့ RAR ဖိုင်လ်လေးကို ဒေါင်းယူပြီး ဖြည်လိုက်ပါ... exe.reg လေးကို Double Click နဲ့ Install ပေးရုံပါပဲ...ပြီးရင် ကွန်ပျူတာကို Restart ချပေးပါ...။
Window ပြန်တတ်လာရင် မိမိတို့မှာ ရှိတဲ့ Antivirus Program နဲ့ Full Scan စစ်ပေးပြီး တွေ့တဲ့ Virus တွေကို Delete လုပ်ပေးပါ...။
www.winkabarkyaw.net ကျွန်တော့်တုန်းကတော့ Adobe Reader တက်တာပါ။ ကျွန်တော်ကတော့ ရှင်းပါတယ် Adobe Reader ကို Uninstall လုပ်ပေးလိုက်တာ အဆင်ပြေသွားပါတယ်။